Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc fanokafana any Vietnam
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc fanokafana any Vietnam
Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc dia ny toeram-pialan-tsasatra iraisam-pirenena voalohany hisokatra manaraka ny morontsiraka Ong Lang any Phu Quoc, ary vonona ny ho lasa toerana halehan'ny safidy ho an'ny fiainam-pianakaviana, fitsangatsanganana orinasa, fampakaram-bady nofinofy, tantaram-pitiavana tantely ary maro hafa. Misongadina ny trano fandraisam-bahiny Efitrano fandraisam-bahiny 305, raha ny mifanila Mövenpick Residences Phu Quoc tolotra Trano fonenana miendrika trano 329 sy villa pisinina 79, tonga lafatra ho an'ny fianakaviana na fijanonana maharitra.
Io no fanokafana farany ny vondrona hotely any Soisa.
"Ity fisokafana ity dia maneho ny fivoaran'ny marika Mövenpick any Vietnam, ary faly izahay mampahafantatra ny lova soisa sy lova culinary manan-karena any amin'ny morontsiraka Phu Quoc, " hoy i Patrick Basset, Lehiben'ny tompon'andraikitra ao Accor, Azia atsimo atsinanana sy avaratra atsinanana ary Maldives.
Raha ny hatsaran'ny serivisy ao amin'ny hotely dia avy amin'ny lova soisa an'i Mövenpick, ny fitiavana mandray vahiny natolotry ny mpiasa ao aminy dia taratry ny endrika mafana sy sariaka amin'ny kolontsaina Vietnamianina ao an-toerana.
Namboarina niaraka tamin'ny a fomba tropikaly, Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc dia mifangaro tsara amin'ny fomba maoderina sy nentim-paharazana amin'ny maro mazava voajanahary namakivaky ny varavarankely feno habe. Ny efitrano fandraisam-bahiny ankehitriny dia misy atiny kanto amin'ny feo tsy miandany. Ny varavarana fitaratra-amin'ny-valindrihana dia mitarika mankany lavarangana manokana isaky ny efitranon'ny hotely, manolotra fahitana mahavariana momba ny ranomasina mamiratra na tendrombohitra maitso. Ny efitrano dia manomboka amin'ny metatra toradroa 35 ka hatramin'ny 72 metatra toradroa ho an'ny Junior Suite. Ny fampiononana ao amin'ny efitrano maoderina dia misy WiFi tsy misy hafainganam-pandeha maimaim-poana, menio ondana ary barika feno entana.
Ho an'ny fijanonana maharitra sy ny fitsangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro, Mövenpick Residences Phu Quoc Toetoetra efitrano fianarana sy efitranom-pianakaviana, samy manana lakozia. Ahitana ihany koa ny toeram-pialantsasatra Villa villa misy efitrano fatoriana roa misy efitrano fatoriana misy efitra fatoriana misy efitra roa sy efitrano fatoriana telo mitoby manodidina ny farihy, raha ny Villa dobo telo-efitra fatoriana 12 ary ny Villa Filoham-pirenena manolora fahitana amoron-dranomasina izay ahafahan'ny vahiny mankafy ny filentehan'ny masoandro.
Ny lova culinary manan-karena an'i Mövenpick dia miharihary amin'ny traikefa fisakafoanana miavaka hita ao trano fisakafoanana sy fisotroana ao amin'ny hotely, ao anatin'izany ny klioban'ny morontsiraka mipetraka eo amin'ny fasika volamena ao amin'ny Ong Lang Beach. Misokatra ho an'ny vahiny sy ny mpitsidika, Aura Beach Club misy bara iray milentika ao anaty rano, fisakafoanana Tapas Azia mahafinaritra, mixology famoronana, fombafomba filentehan'ny masoandro isan'andro ary fialamboly mahafinaritra. Ny zava-mahadomelina mahandro hafa ao amin'ny hotely dia misy ny sakafo iraisam-pirenena sy ny toeram-pisakafoanana velona ao The Restauranter Islander; Vietnamianina ankafiziny sy hazan-dranomasina ao Lang Chai; labiera fanaovana asa-tanana any an-toerana Lang Chai Bar; ary dite, kafe & sôkôla Vietnamianina amin'ny Waverly Lounge.
The hotely fandraisam-bahiny Mampanantena ny hamorona fotoana manan-danja ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpandeha zandriny miaraka amin'ny Club kely vorona ary M Lounge club tanora. A Mövenpick Family Ny programa dia miantoka ny filan'ny vahiny tanora, ao anatin'izany ny kojakoja fandroana manokana sy ny menu Power Bites.
Manolotra ilay toeram-pialofana dobo filomanosana enina, ao anatin'izany ny kamory roa. Ny tobim-pahasalamana hafa dia misy ny Toerana fanatanjahan-tena Elemen izay manasongadina ireo fitaovana manara-penitra sy studio yoga. Ho an'ny fotoana fitsaboana ara-pahasalamana sasany, Elemen Spa & Salon misy efitrano fitsaboana 15, sauna ary jacuzzi. Ny vahiny dia afaka misafidy karazana fitsaboana ara-pahasalamana, fanorana tongotra, ary fitsaboana volo sy fantsika.
Tsy misy antsipiriany kely tsy raharahiarina amin'ny fampakaram-bady sy fankalazana ao amin'ny Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc. ny 720 metatra toradroa Coral Ballroom dia manasongadina toerana tsy misy tsanganana miaraka amin'ny valindrihana 6.8 metatra haavo sy foyer lehibe 324 metatra toradroa izay afaka mampiantrano vahiny hatramin'ny 860. Azo zaraina ihany koa ny efitrano fanaovana baolina efitrano fivoriana efatra hanaovana fivorian'ny vondrona kely kokoa.
Ny toetr'andro tropikaly mahafinaritra dia mirona amin'ny fitrandrahana ara-panahy ny tontolo voajanahary maitso. Afaka ny vahiny mandeha mamaky ala tropikaly izay mitarika any amin'ny riandrano na bask ao amin'ny fitoniana amoron-dranomasina misy aloky ny voanio. Matsiro fitsidihana sakafo amin'ny alàlan'ny tsena amin'ny alina, na ny fitsidihana ny toeram-pambolena dipoavatra, ny fiompiana perla na ny saosy trondro dia manome topy maso ny fomba fiainana Vietnamianina eo an-toerana.
"Manantena ny handray vahiny ao amin'ny tranon'ny nosy izahay ao amin'ny Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc. Ny vahiny dia afaka manantena andian-tantara mahaliana mandritra ny fotoana ijanonany miaraka aminay, manomboka amin'ny fizahan-tany amin'ny nosy ka hatramin'ny fitsidihana sakafo any amin'ny tsenan'alina. Ny toeram-pialan-tsasatra dia manolotra fialantsasatra ho an'ny nosy tonga lafatra avy amin'ny fahataitairana sy fiainana ao an-tanàna ho an'ireo izay mitady handany faran'ny herinandro milamina miaraka amin'ny fianakaviana,», Hoy i Philippe Le Bourhis, Tale Jeneralin'ny Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc.
Ho fankalazana ny fandefasana azy, Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc dia manolotra tolotra fitsaharana amin'ny faran'ny herinandro miaraka amin'ny taha manomboka amin'ny VND 2.000.000 isan-alina ao amin'ny efitrano Studio Mountain View King miaraka amin'ny sakafo maraina ho an'ny roa ary trosa isan'andro VND 1.000.000, izay mety navotana amin'ny fitsaboana fisakafoanana na spa. Ny tolotra fanokafana dia manan-kery manomboka izao ka hatramin'ny 31st Oktobra 2020.
Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc ary Mövenpick Residence Phu Quoc dia hita ao amin'ny 1 Ong Lang Beach, Cua Duong Village, Phu Quoc, Vietnam, fifindrana 35 minitra avy amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Phu Quoc. Ny nosy dia sidina adiny iray miala ny tanànan'i Ho Chi Minh, adiny roa avy any Hanoi, ary mifandray amin'ny zotra mivantana avy any Bangkok, Seoul, ary Singapore. Ho an'ny famandrihana, azafady mailaka [email voaaro] na antsoy ny +84 (0) 297 26 99999. Raha tsy izany, raha te hahalala bebe kokoa momba ny Mövenpick Hotels & Resorts, tsidiho azafady www.movenpick.com.